Keen Ongororo - Pamhepo kuverenga kwepfungwa
Kuverenga zvinyorwa zvepfungwa > Ongororo Yakanaka
Chidzidzo cheKezere Chizere
KeenWebhusaiti inozvirumbidza ma1000 e "masayendisiti akasimbiswa" chinhu chinonakidza nezvazvo hapana chimwe chemashiripiti chakasimbiswa nemumwe munhu. Keen ndeyechokwadi inekambani yefoni AT&T. Chero ani anozviti svikiro anogona kujoina kumusoro otanga kuita mari kubva kune vasingafungire vatengi. Iko hakuna maitiro ekuongorora kana kuongorora. Psychics inobhadhara Keen.com mari kuti iwanikwe pane yavo saiti, uye kupihwa Keen foni nhamba. Keen aimbove akanaka asi nguva pfupi yadarika dhairekitori ravo rakazadzwa neboka revatsva, mune-vane ruzivo rwevanachipangamazano ikozvino. Ini handikwanisi kukurudzira Keen zvakare. Ndakabviswa nevakawanda vavo vanonzi masvikiro. Kana iwe uchitsvaga rairo chaiyo ini ndinokurudzira iwe dzivisa Keen. Usatarisira kudzoreredza mari yako kana iwe ukawana yakaipa kuverenga kana .. Ini handina kumbogona.
Keen.com yakavambwa pamusoro pemakore gumi apfuura neyepfungwa chaiyo. Munguva pfupi yapfuura muridzi akatengesa kambani kuAT&T, kambani yemafoni, uye ivo vakatsvedza kudzika kubva ipapo, kusvika parizvino ivo vasina maturo mumaonero angu. Yadzo mhinduro system yakanaka asi ini ndinonzwa kuti inoshandiswa nyore.
Keen rine zvishoma kwete kuongorora nzira yemapfungwa. Vane zvimwe zvinodiwa apo mapfungwa anonyora asi hapana chinopupurira mafungiro echokwadi. Chikonzero che Keen ane mafungiro akawanda kune dzimwe nyika pane chero hupi hupi hupi hupi hupi hunoita nokuti huchaita kuti munhu wese ape zvakawanda kuverenga.
Keen ichangobva kugadzirisa yavo webhusaiti kuti iwedzere kushamwaridzana. Ini ndinoda dhizaini nyowani uye ndakaona zviri nyore kwazvo kutenderera uye nekukurumidza kupindura. Kutsvaga psychic uye kuronga kuverenga navo zvaive nyore. Zvinosuruvarisa kuti vanachipangamazano avo vepfungwa vakarova zvakanyanya kana kupotsa.
Keen inopa 3 maminiti pasina kwevatengi vatsva. Iwe unofanirwa kuisaini, kupa kadhi rechikwereti uye kutenga mamwe maminetsi kuti uwane maminetsi ako e3 zvakadaro. Ndakawana maminetsi e3 akafamba nekutsanya uye ndakaapedza ivo vose vachiedza kuwana psychic inyanzvi. Nechivimbo ine mhandara yakanyanya kuve yakawanda inobvisa pane yese yepfungwa dzepfungwa paIndaneti.
Ndine chokwadi chokwadi Keen haina dhipatimendi rebasa revatengi. Zvirinani kuti ini ndaisakwanisa kuwana munhu mupenyu kuti apindure. Ndine akawanda ema auto-mhinduro maemail anondiudza kuti rutsigiro ruchange ruri mukubata munguva pfupi asi ini handina kana kumbobvira ndawana chero mhando yekubatana. Keen haipe runhare rutsigiro chete email rutsigiro.